တူရကီနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အကောင်းဆုံး နိုင်ငံသားများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်များတူရကီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက နှင့်ရှေ့နေများ တူရကီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားတူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ တူရကီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ တူရကီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ တူရကီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ တူရကီရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ တူရကီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တူရကီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, တူရကီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ မျက်စိတူရကီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ တူရကီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်တူရကီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ တူရကီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ တူရကီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ တူရကီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ တူရကီ၊ တူရကီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ တူရကီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ တူရကီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ တူရကီတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ တူရကီတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်တူရကီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ တူရကီတွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ တူရကီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ တူရကီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်တူရကီနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရတူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀, ၀၀၀
မဲဆန္ဒစနစ်နှင့်စျေးကွက်စီးပွားရေးကို ဦး တည်သည့်တိုးတက်မှုသည် ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် Ataturk ကွယ်လွန်ပြီးနောက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်အောက်ခံသူဟုထင်မြင်သောစစ်တပ်ကအစိုးရများကို ထပ်မံ၍ အထင်အမြင်လွဲမှားသောအစိုးရများကိုထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကာလကြာရှည်စွာမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းအပ်နှံရေးဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်တူရကီ၏အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်သောတင်းမာမှုများကိုနှေးကွေးစေခဲ့သည်။
တစ်ခုခုကိုတူရကီ၌သင်၏ဘဝအသစ်ပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဟုချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, အမှုဆောင်အရာရှိလိမ့်မည်အကူအညီမဲ့ငွေသား။ အစမှ စ၍ တစ်ပတ်ချင်းစီ၊ တစ်လမှတစ်လနှင့်နှစ်စဉ်ငွေတောင်းခံလွှာများကို သိ၍ အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်အတွက်အသုံးစရိတ်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင်၏ဝင်ငွေသည်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးကဲ့သို့သောရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောငွေကြေးဖြစ်သည့်မတည်ငြိမ်သောလဲလှယ်ရေးအတိုင်းအတာသည်ယိုယိုနှင့်တူသောကြောင့်ပုခက်ဇုန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ပညာရှိပါ။
Didim ရှိသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်နေထိုင်သောစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်အသုံးစရိတ်အစီအစဉ်သည်တူရကီနိုင်ငံ၏အကုန်အကျအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိအိမ်ငှားတစ် ဦး အတွက်ကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ ငွေသားအများစုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်မှမြင့်မားသောငွေကြေးကုန်ကျမှုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀% သည်ဤသည်မှာသင်၏အရင်းအနှီးစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစားသုံးမှုမရှိဘဲတည်ဆောက်ရန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ၃၁ ရက်မှတစ်နှစ်အထိကြာသည်။
မိသားစုယူနစ်ပရိဘောဂများကိုမည်သူပေးပို့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သူတိုင်းက၎င်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်း၊ ငွေသားခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောဖိအားပေးမှုများကိုပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောတူရကီတင်သွင်းမှုနှင့်အခွန်မူဘောင်များသည်အခွင့်သာဆုံးအခြေအနေများတွင်နားလည်ရန်ခက်ခဲပြီးကြီးမားသောထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပုံမှန်ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကုန်ကျစရိတ်ကငွေကိုမထားဘူး၊ ဒီမှာပရိဘောဂအသစ်တွေဝယ်သင့်တယ်။
အဖြူရောင်ပစ္စည်းများသည်အကုန်အကျများသော်လည်းများစွာသောအရင်းအမြစ်များသည်ရွေးချယ်သောအစီအစဉ်များကိုမကြာခဏကြိုတင်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀ ယ်ယူသောအခါမှတ်သားထားပါ။ တူရကီရှိအိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်လျှင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုမှာအခြေခံကျသော (သို့) လုံးဝအသုံးတည့်သည့် ၀ န်းကျင်တွင်ရောင်းချသောအိမ်များကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
တူရကီတွင်အသက် ၆၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးနေထိုင်ခွင့်လိုင်စင်ဖြင့်နေထိုင်သူသည်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၆၅ နှစ်ကျော်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဘဏ်တွင်ငွေအမြောက်အများစုဆောင်းထားပါကမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်အခက်အခဲများရှိသော်ငြားတစ်လမှတစ်လကုန်ကျစရိတ်သည်မှားယွင်းသောအခွင့်အလမ်းအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့မဟုတ်အရေးပါလှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပေါင်သို့ပြေးနိုင်ပါတယ်။ လူအနည်းငယ်သည်ပုဂ္ဂလိကဆေးကုသမှုခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးအချို့မှာအစိုးရအာဏာပိုင် SGK မူဘောင်ကိုပေးသည်။
အတော်အတန်ခဏကြာသော်ပြင်ပမှများစွာသောသူတို့သည်မှားယွင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ရက်များမရှိတော့ပါ။ အမှန်စင်စစ်၊ နွေရာသီအပန်းဖြေစခန်းများတွင်ပင်အကောင်းဆုံးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။ သင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်မီဒီယာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်မှလွဲလျှင်တရား ၀ င်စီးပွားရေးကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
လူအချို့ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောရန်တိုက်တွန်းလိုသော်လည်း TEFL ထောက်ခံချက်လိုအပ်သည်။ အခြားသူများသည်အစ်ဂျီးယန်းနှင့်မြေထဲပင်လယ်တစ်လျှောက်ရှိအခါသမယအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင်၊ ဖြတ်ပြီးမသွားနဲ့အလုပ်အကိုင်အချို့ကိုလျှင်မြန်စွာရှာဖွေရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပျရှိပါကဖြစ်လျှင်, ထွက်သွားခြင်းမပြုမီကတန်းစီနှင့်အာမခံသဘောတူညီချက်များနှင့်အလုပ်လုပ်လိုင်စင်သတ်မှတ်ထားကြသည်။
အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းကမျက်နှာပြင်ကိုစူးစိုက်ပြီးနေ့စဉ်ဘဝနှင့်ဆင်တူသည်။ နှစ်စဉ်ဆိတ်သို့မဟုတ်သိုးပါ ၀ င်သည့် Kurban Bayram မှသင်၏တူရကီအဖော်၏ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရက် ၃၀ ကြာသည်အထိ၊ ဘဝနေထိုင်ပုံသည်သင်ဒီမှာနေထိုင်သောအခါအမှန်တကယ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အိမ်ရှင်များသည် coke နှင့် nuts များသာပြုလုပ်သောမင်္ဂလာပွဲများမှလူအားလုံးသည်ည ၁၀ နာရီတွင် DIY ကိုလုပ်သောအနီးအနားရှိအိမ်နီးချင်းသို့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆူညံသံများကျဆင်းခြင်း၊ သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပြီးယဉ်ကျေးမှုကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းကိုပြလိမ့်မယ်။
၆။ Stereotype မထားပါနဲ့
ယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအစာ၊ သမိုင်း၊ ဘောလုံး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ ရာသီဥတုနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ များအတွက်တူရကီသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီးယေဘူယျအားဖြင့်ထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ရှိသည်။ Didim ၏ Aegean ဆုတ်ခွာမှုတွင်ဗြိတိသျှ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောကွန်ယက်ဟောင်းအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူစွာအလယ်အလတ် Konya သည်အဓိက Anatolian ခရိုင်ရှိ Istanbul နှင့်လုံးဝမတူပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော Izmir သည်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုအရနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ပုံစံများကို ဦး ဆောင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အံ့ variety စရာကောင်းလောက်အောင်မျိုးစုံသည်အစက်အပြောက်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အစားအစာနှင့်သမိုင်းကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်အချက်ကြောင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။
ဆက်သွားပါ၊ တူရကီတွင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များမှာဖြည်းညင်းစွာအနားယူရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆင်ပြေရန်အခွင့်အရေးပေးရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်အိမ်အဖြစ်ရွေးသူမည်သူမဆိုအတွက်စားပွဲဝိုင်းသို့ယူဆောင်လာရန်နိုင်ငံတွင်များစွာရှိသည်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရမည်ကိုမရွေးရသေးပါကကျော်ကြားလှသောယခင်ကန့်ကွက်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေးသည့်ဤဆောင်းပါးသည်အကြံဥာဏ်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များပိုမိုပေးသည်။ ထို့အပြင်တူရကီနိုင်ငံ၏အိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်ယူရန်သင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်ငါတို့မြေဈေးကွက်သို့အရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းရန်ရှာဖွေလိုသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀, ၀၀၀
> အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ - ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ တန် VC ရန်ပုံငွေကိုဝယ်ပါ
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်တူရကီသည်နိုင်ငံခြားသားများအားနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အိမ်ခြံမြေကဏ္ development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားပေးမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့စွဲဖြင့်အစိုးရ၏ပြန်တမ်းတွင်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုလျှော့ချသည့်နိုင်ငံသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအစိုးရမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များအရအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အောက်ပါရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပြုလုပ်သောနိုင်ငံခြားသားများသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်။
> အိမ်ခြံမြေ: သုံးနှစ်ရောင်း။ မဟုတ်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ကိုအိမ်ရောင်းရန်
> ဘဏ်အပ်ငွေ - အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ကိုတူရကီဘဏ်များတွင်အပ်နှံပါ
> အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များ - ၃ နှစ်ကြာသော့ခတ်ထားသောတူရကီအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ပေါင်း ၅ သိန်းကိုဝယ်ပါ
> အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှု - အနည်းဆုံးလူ (၅၀) ခန့်အလုပ်ခန့်ထားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ တူရကီအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်တူရကီရှိ၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုတူရကီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ တူရကီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၃၇ နိုင်ငံမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တူရကီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်တူရကီမှ Golden Visa သို့နေထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်တူရကီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ တူရကီမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ တူရကီသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ တူရကီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ငါတို့တတ်နိုင်မှတဆင့်တူရကီအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ တူရကီအတွက်, တူရကီအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်, တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားနှင့်တူရကီများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံသား ၃၀ မှတူရကီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့တူရကီရှိရွှေဗီဇာ။
တူရကီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
တူရကီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့တူရကီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုတူရကီနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
တူရကီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
တူရကီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်တူရကီနိုင်ငံသား
တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ တူရကီမှသို့မဟုတ်တူရကီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ဖောက်သည်များကိုတူရကီနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုခြင်းကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
တူရကီအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုတူရကီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နိုင်ငံသား။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တူရကီနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်ထားသောပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Duration: 1 လ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တူရကီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်တူရကီမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် တူရကီတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တူရကီနိုင်ငံအတွင်းသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် တူရကီ၌မဆိုတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းကြသည်မဟုတ်။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် တူရကီအဘို့ တူရကီရှိမျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက တူရကီရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ တူရကီတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်တူရကီအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်တူရကီအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် တူရကီအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု တူရကီအဘို့ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်တူရကီရှိသူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကြက်ဆင် တူရကီရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား တူရကီအတွက်ရှေ့ရပျ တူရကီရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတူရကီနှင့် KYC အတွက်တိကျသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းတူရကီရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်တူရကီအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်တူရကီအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်တူရကီအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားရှိဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ တူရကီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏သက်တမ်းအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ တူရကီအတွက် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ တူရကီအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တူရကီ၌ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူတူရကီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တူရကီအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ တူရကီ၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတူရကီတွင်လည်းပံ့ပိုးပေးသည်။ ထိုတူရကီအတွက်တူရကီအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားတူရကီနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်တူရကီနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ တူရကီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (တူရကီနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
တူရကီသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလိုအပ်လိမ့်မည် တူရကီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် တူရကီရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, တူရကီအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် တူရကီအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် တူရကီရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်တူရကီ တူရကီရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ပါ တူရကီအတွက်ချက်ချင်းစတင်သည်။
တူရကီရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ တူရကီအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် တူရကီအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
တူရကီအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
တူရကီအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ တူရကီများအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, တူရကီအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်တူရကီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကြက်ဆင်.
တူရကီတွင် Web ဒီဇိုင်း
တူရကီတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တူရကီအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
တူရကီအတွက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တူရကီအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုတူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တူရကီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ တူရကီအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်တူရကီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ တူရကီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်တူရကီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တူရကီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်သင့်ကိုယ်စားတရား ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တူရကီအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်တူရကီသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်တူရကီသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တူရကီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကတူရကီပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်တမန်တော်များအားတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေတရား ၀ င်ဖြစ်စေ၊
အမေးအဖြေများ - တူရကီနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုတူရကီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ တူရကီ၌တည်၏။
တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့် တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုတူရကီနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်တူရကီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တူရကီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ တူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလျှောက်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာတူရကီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်တူရကီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများက။
စျေးသက်သာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | စျေးပေါသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတူရကီ | စျေးရောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စီးပွားရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးများ စျေးသက်သာတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
တူရကီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတူရကီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရား ၀ င်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တူရကီသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ တူရကီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်တူရကီအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ တူရကီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တူရကီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
တူရကီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုများ | တူရကီမှာရှိတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ တူရကီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ တူရကီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ တူရကီများအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
တူရကီရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းများဖြင့်တူရကီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တူရကီနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တူရကီသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ တူရကီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ တူရကီတွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်တူရကီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ တူရကီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တူရကီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်တူရကီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
တူရကီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | တူရကီရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ တူရကီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ တူရကီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ တူရကီများအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တူရကီနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအားဖြင့်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ (အိမ်ခြံမြေ) ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်ဖြစ်သည်။ တူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးပြီး၊
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ မလေးရှားမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံမှအိန္ဒိယမှတူရကီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှတူရကီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
Ankara တည်နေရာ AG
Pro ကို Helvetia
link ကိုမှ တူရကီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , တူရကီမှာရှိတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရေးအတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်